Mabhegi → Kushambadzira mbatya • nyanzvi P & M yekushongedza kwemakomputa
Kushambadzira mabhegi iyo yakanaka kushambadzira yepakati, asi zvakare inoshanda yekuratidzira yekambani. Bhegi iine mhando yemhando yepamusoro, kunyangwe ichishandiswa, inomiririra mucherechedzo kwenguva yakareba.
Kushambadzira mabhegi akadhindwa aine akakwana kushambadzira svikiro
Zvishandiso zvinoshanda vanogara vari chipo chinogamuchirwa, uye nekutenda kune yavo yakapusa fomu, ivo vanogonesa kumaka neanenge chero magirafu uye chero nzira yekumaka. Kutenda kune izvi zvigadzirwa zvekushambadzira, iyo mhando inogona kuwana mukurumbira uye vateereri vatsva. Iyi mhinduro yakanaka kwazvo kana mutengi asingade kushandisa mari yakawanda kushambadza.
Zvikwama ndeimwe yemachira anodhura ekushambadzira, uye panguva imwechete inopokana nezvakashata zvekunze zvinhu. Uye zvakare, kana tichishandisa mabhegi anoshandiswazve, isu tinotarisira nharaunda, izvo zvinowedzera kudziyisa mufananidzo wekambani. Mhando dzakasiyana-siyana dzemavara dzinokutendera iwe kusarudza zvigadzirwa mumavara ekambani kana kirabhu. Mari yakaderera yemabhegi pamwe nekunyora zvinogonawo kuva chipo chakakura kushamwari kana mhuri panguva yezororo kana zvimwe zviitiko.
Isu zvakare tine mu-mold mabhegi muchitoro mabhegi ane ruvara rwe fluorescent yero ine mutsara unoratidza. Chirevo chakadai chinowedzera kuwedzera kuoneka, kunyanya mumwaka wekuvhuvhu nemuchando wegore uye kwasviba. Kutenda netambo, bhegi rinogona kuiswa kumashure uye nekudaro rinowedzera kuoneka kwaro mumugwagwa.
Kambani yedu ine yayo michina paka. Isu tinokwanisa kugadzira zvinyorwa machira emakomputa, kudhinda kwescreen kana kuchinjisa kwethermo, inoenderana nezvinotarisirwa nemutengi.
Chirongwa chakaparadzaniswa chakagadzirirwa yega giraidhi, pahwaro hwacho kuiswa ipapo. Tine chokwadi chekuti zvinozadzikiswa zvinosangana nezvinotarisirwa, kunyangwe isu tine chokwadi chekuti mhedzisiro yacho inofadza kunyangwe inonyanya kudiwa.
Kutenda kune yakasarudzika-yakagadzirirwa giraidhi, chigadzirwa chinozowana yakasarudzika kutaridzika Dhizaini yakadaro haigare isina hanya kune vanogamuchira. Isu tinopa akasiyana mamodheru anowanikwa mune mazhinji mavara. Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota taura nesu kubataizvo zvinoratidza sarudzo yakanakisa.
Kushambadzira mabhegi vane mukana wavo mukuru - mutengo wakaderera. Imhaka yemutengo wakaderera kuti vanhu vazhinji vanosarudza ichi chigadzirwa mumadhigiramu anotenderera. Kugadzikana kwavo kwekushandisa kunoita kuti iwe ugadzire masheya anogona kushandiswa chero nguva yegore uye mune chero mamiriro. Uye zvakare, mune yekudhinda, mutengo unoenderana nevhoriyamu - iro rakakura kuraira, iwo wakaderera muyero mutengo.
Isu tinopa yemahara uye nekukurumidza chirongwa kukoshesa. Yasimbiswa seams uye zvinhu zvakasimba zvave zvichishandiswa kusona mabhegi, zvese kudzikisira mukana wekubvarura, abrasions uye nekupa chigadzirwa chinoshanda kwemwedzi yakawanda.
masaga ekotoni ane anodhindaeco mabhegi ane anodhindaeco mabhegi ane ako anodhindaeco mabhegi ane anodhindamachira emachira akadhindwaakadhindwa mapepa mabhegiakadhindwa masaga ekotonimasaga ekotoni ane akadhindwa emutengomasaga ekotoni ane Lublin anodhindamasaga ekotoni neWarsaw anodhindamasaga ekotoni ane ako anodhindamasaga ekotoni ane chako chinyorwa Warsaweco mabhegi ane anodhindaeco machira masaga ane anodhindaeco mabhegi ane anodhindaeco mabhegi ane chako chinyorwaakanzwa mabhegi ane chinyorwafoil mabhegi ane anodhindafoil mabhegi ane akanyorwa mutengo runyorwalaminated mabhegi ane anodhindamachira erineni ane chinyorwamachira ejira ane anodhindamabhegi ekutenga ane chinyorwaakadhindwa mapepa mabhegimapepa mabhegi ane allegro akanyorwaakadhindwa mapepa mabhegi emutengomapepa mapepa nemapepa eKrakowmapepa mabhegi ane anodhinda poznańakadhindwa mapepa mabhegi mugadziriakadhindwa mapepa mabhegi akachipamapepa mabhegi neWarsaw anodhindazvikwama zvevasheni zvine zvakapetwacanvas mabhegi ane chako chinyorwapolypropylene mabhegi ane kudhindazvipo mabhegi ane chinyorwaakadhindwa mapepa ekushambadzira mabhegipromotional mabhegi ane anodhindakushambadzira mabhegi ane akanyorwa emutengo runyorwakushambadzira mabhegi ane anodhinda poznańmabhegi ekusimudzira neWarsaw anodhindakushambadzira mabhegi ane akadhinda wrocławakadhindwa mamvemve mabhegimachira ejira ane chinyorwaakadhindwa mabhegimabhegi ane chinyorwa chemashokotsika dzakadhindwa mabhegimabhegi ane chinyorwa - zvakachipamabhegi ane chinyorwa cheWarsawmabhegi ane chako chinyorwamabhegi ekutenga ane anodhinda